एक दशकपछि फेरी ‘गैंडा कूटनीति’ ! राजाहरुले दिन्थे उपहार
Friday, 13 Jul, 2018 9:47 AM
२९ असार, काठमाडौं । बिहिबार नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनलाई एक जोडी गैंडा उपहारस्वरुप प्रदान गर्यो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङलाई एक जोडी गैंडा ‘भद्र’ र ‘रुपसी’ हस्तान्तरण गरेका थिए । दुबै गैडा मंगलवार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो । २०७३ असार २६ गते नेपाल सरकारले चीनलाई गैंडा उपहार दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले पोथी गैंडाको नाम ‘रुपसी’ र भाले गैंडाको नाम ‘भद्र’ राखेको छ । गैडा हस्तान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अरु देशसँगको मित्रतालाई सुदृढ गर्दै लैजाने लक्ष रहेको बताए । नेपालका लागि चीनका राजदुत यु हङले गंैडाका लागि नेपालजस्तै चीनमा पनि अनुकुल वातावरण रहेको बताउदै उपहारमा प्राप्त गैंडालाई आफ्नै परिवारसरह पालनपोषण गरिने बताइन ।
तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनलाई २०४४ वैशाखमा पहिलोपटक नेपाल सरकारले एक जोडी गैंडा उपहार दिएको थियो । यसपछि सुरु भयो नेपालमा ‘गैंडा कूटनीति’। एक दशक अघिसम्म नेपालले नौवटा मुलुकलाई गैंडा उपहार दिएको थियो विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमका कारण एक दशक रोकिएको ‘गैंडा कूटनीति’ फेरि चर्चामा आएको छ ।
पछिल्लो पटक सन् २००६ मा तात्कालीन युवराज पारसले अस्ट्रिया सरकारलाई एक जोडी गैंडा उपहार दिएका थिए । त्यसपछि एक दशकसम्म गैंडा कूटनीतिमा पूर्वविराम लागेको थियो । वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्न गैंडा उपहार दिइएको बताए । ‘दुई देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका लागि पनि हो,’ तात्कालीन वनमन्त्री अग्नीप्रसाद सापकोटा २०७३ सालमा चीन जाँदा चिनियाँ वनमन्त्री र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्रीले गैंडा दिन आग्रह गरेका थिए ।
वन्यजन्तु उपहार दिन मिल्ने नमिल्नेबारे राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि व्यवस्था छैन । वनस्पति तथा वन्यजन्तु ओसारपसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (साइटिस) मा वैज्ञानिक र शैक्षिक प्रयोजनका लागि दिन मिल्ने व्यवस्था छ । नेपाल साइटिसको पक्ष राष्ट्र हो र यससम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन । कानुन मौन बसेकाले नै मन्त्रिपरिषद्ले गैंडा उपहार दिने निर्णय गरेको हो । उपहार पनि दुवै देशका वैज्ञानिक निकायले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनका आधारमा दिइन्छ ।
बच्चाको स्वामित्व कसको ?
गैंडा विज्ञहरुले गैंडा दिएकोमा आपत्ति त जनाएका छैनन् । तर त्यसले जन्माएको बच्चाको स्वामित्व भने नेपालकै हुनुपर्ने तर्क गर्छन । यति मात्र नभई त्यसले दिने आम्दानीको केही अंशको अंशियार पनि नेपालले पाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । तर सरकारले अहिले कूटनीतिक फाइदा मात्र हेरेको विज्ञहरु टिप्पणी गर्छन । ठूलो लगानी गरेर संरक्षण गरिएका जन्तु दिँदा प्रत्यक्ष फाइदा पनि हेर्नु पर्ने भन्दै अहिले परिवेश फेरिएकाले कूटनीतिले मात्र नपुग्ने उनीहरुको तर्क छ ।
यता पूर्व वनमन्त्री अग्नीप्रसाद सापकोटाले भने चीन सरकारले यसबापत भक्तपुरमा निर्माण गरिन लागेको प्राणी उद्यान, प्राणी अस्पताल र विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी उनले आफू मन्त्री हुँदा गरेको भ्रमणबाट फर्किएपछि चीनको वन मन्त्रालयले यसबाहेकका क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्छौं भनेर इमेल गरेको बताए । इकोलोजिस्ट डा. महेश्वर ढकाल भन्छन, ‘छोरी दिँदा अभिभावकले ज्वाईंको योग्यता र क्षमता जसरी जाँच्छन, गैंडा दिँदा पनि त्यसैगरी त्यसको उपयुक्त वासस्थान र व्यवस्थापन क्षमता हेरिन्छ ।’
कसलाई कति गैंडा ?
गैंडालाई संकटापन्न वन्यजन्तुको रूपमा साइटिसको अनुसूची १ मा राखिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (चौथो) संशोधनमा पनि यो दुर्लभ वन्यजन्तुको सूचीमा छ । नेपाल र भारतमा मात्र पाइने एकसिंगे गैंडा लोप भएपछि चीनले नेपालसँग दुई जोडी गैंडा मागेको हो । जसअन्तर्गगत पहिलो जोडी पठाइएको छ ।
चीन सरकारलाई आफ्ना देशका एक सिंगे गैंडा जोगाउन नसकेकोमा धेरै पश्चाताप छ । चीनको वैभवमा गैंडाको अनुपस्थित खड्किएको छ । त्यसो त गैंडाका लागि चीन सरकारले आफ्नो दूतावासमार्फत धेरै पहिलेदेखि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिरहेको थियो ।
सरकारले सबैभन्दा धेरै गैंडा अमेरिकालाई दिएको छ । अमेरिकाका विभिन्न चिडियाखानालाई गरेर तीन जोडी गैंडा विभिन्न समयमा उपहार दिइएको छ । चिडियाखानालाई प्रत्यक्ष रूपमा दिन नमिलेपछि सरकार–सरकारबीचको उपहारका रूपमा दिइएको हो । दक्षिणी छिमेक भारतलाई पनि दुई जोडी गैंडा दिइएको थियो । त्यसबापत सरकारले भारतबाट १८ वटा हात्ती ल्याएको थियो । ती हात्ती ल्याइएपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्ती प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । यद्यपि त्यतिबेला भारतबाट ल्याइएका हात्ती स्वस्थ नभएको चर्चा थियो । सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकालाई ६, भारतलाई ४, अस्ट्रियालाई २, बेलायतलाई २, जापानलाई २, जर्मनीलाई २, पाकिस्तानलाई २, बर्मालाई २ र थाइल्यान्डलाई २ गरी २४ गैंडा दिइसकेको छ । तर, यसको विस्तृत विवरण र तिनको अवस्थाबारे सरकारका सरोकारवाला निकाय बेखबर छन् ।
गणतन्त्र आउनुपूर्व (२०६५ जेठ १५ अघि) राजालगायत राजदरबारका अन्य सदस्यले विभिन्न मुलुकसँग मित्रता गाँस्ने नाममा गैंडा उपहार दिन्थे । दरबारको निर्देशनमा महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषले उपहारको सबै चाँजोपाँजो मिलाउँथ्यो । कोषको अध्यक्ष राजकुमार हुने व्यवस्था थियो । सन् २००६ अघि सम्म यसरी नै उपहार दिइँदै आइएको थियो
नेपालमा कति छन् गैंडा ?
पछिल्लो गणनाअनुसार नेपालमा ६ सय ४८ गैंडा छन् । तीमध्ये चितवनमा ६ सय ५, बर्दियामा ३५ र शुक्लाफाँटामा ८ वटा छन् । विश्वकै दुर्लभ एक सिंगे गैंडा नेपाल र भारतमा मात्र पाइन्छ । दुई देशमा गरी यसको संख्या करिब २५ सय हाराहारीमा छ ।